Yakanakisa Slip-on Flange Mugadziri uye Fekitori | Puyang
Nhanganyaya: Slip pane flange, inonziwo SO flange. Imhando yemasiraidhi pamusoro pepombi ine dhizaini yemukati yakati kurei kupfuura pombi. Sezvo dhayamita yemukati yeiyo flange iri yakati kurei kupfuura iyo yekunze dhayamita yepombi, iyo SO flange inogona kusunganidzwa zvakananga nemidziyo kana pombi ne fillet weld kumusoro uye pasi kwetambo. Iyo inoshandiswa kuisa pombi mukati mehomwe yemukati yeiyo flange.
Iyo SO flange inogona kukamurwa kuita SO Welding plate flange uye SO Welding hubbed simbi pombi flange. Hemhando dzayo michina iri pakati peakasangana flange uye inosunungura flange. Chimiro chiri nyore, uye kugadzirisa kuri nyore. Saka slip pane flange welding inowanzoshandiswa mune dzakasiyana mapaipi emvura.
Zvinoenderana nechiso chakasiyana, kune mamwe mabhureji akasimudzwa echiso mhando uye mhete mhando yakabatana kumeso mhando.
Mukushandisa kwakawanda, mainjiniya anofanirwa kutsvaga nzira yekuvhara mukamuri kana humburumbira nenzira yakachengetedzeka, kazhinji nekuti chinhu chiri mukati chinofanira kusiyana nechinhu chiri kunze mukuumbwa kana kumanikidzwa. Vanoita izvi nekusunga zvidimbu zviviri zvesimbi kana chimwewo chinhu pamwe nedenderedzwa remabhaudhi pamuromo. Uyu "muromo" uri flange.
Iwe unogona kubatanidza zvikamu zviviri zvesimbi pombi nekuisa simbi kana kuzvisanganisa pamwe chete, asi mapaipi akabatana neiyi nzira anogona kubatwa nekuputika pakudzvinyirirwa kwakanyanya. Nzira yekubatanidza zvikamu zviviri zvepombi zvakanyanya zvakachengeteka ndeyokuva nemipendero yakapetwa yaunokwanisa kubatana nemabhaudhi. Nenzira iyi, kunyangwe magasi kana zvinwiwa zvichivakira kumanikidziro akakwirira mukati pombi, zvinowanzo bata pasina dambudziko.
Zvakanakira Slip On Flange
Kuderedza kuisa mari
Zvimwe zviri nyore kuenderana nezvimwe zvikamu panguva yekuisirwa
Zvirinani kuburitsa humbowo
Wemukati nekunze kwekutenderera pane flange
Zvinotora nguva shoma kucheka nenzira kwayo pombi
Sezvo pombi inotsvedza pane iyo flange, inoenderana neyepazasi hub pane slip pane flange
Yakawanikwa muna 2006
18000 mativi emamirimita
Yapedza chigadzirwa chekuchengetedza, zvigadzirwa zvekuendesa, mbishi zvinhu, yekuchengetedza fekitori,
Kupa zvigadzirwa zvinobatsira, kukurudzira kwakanaka service
Injiniya yemuchina, michini yemugodhi, michina yemagetsi chiteshi, michina yekudzivirira
Pashure: Plate Flange
Zvadaro: Chigadziko chiri kuchema Flange